History - McKnight Foundation
William L. McKnight iyo xaaskiisa, Maude L. McKnight, ayaa aasaasay Xarunta McKnight Foundation ee Minneapolis 1953. Mid ka mid ah hoggaamiyayaashii ugu horeeyay ee 3M, Mr. McKnight wuxuu ka kicitimay adeegaha dukaanka ee madaxweynaha, madaxa, iyo guddoomiyaha guddiga xirfadda 59 sano, laga soo bilaabo 1907 ilaa 1966. falsafadiisa uu ku leeyahay qorshaha shaqaale iyo hal-abuurka ayaa waliba hagaya shirkado badan oo hor leh.
Xarunta McKnight Foundation waa urur madax banaan oo madaxbannaan; kuma xirna 3M.
Sanadkii 1974-dii, wax yar ka dib dhimashadii xaaskiisa, McKnight waxay waydiisatay ilmo keli ah, Virginia McKnight Binger, si uu u hoggaamiyo aasaaska. Iyadoo la shaqaynaysa Russell Ewald oo ah agaasimaha guud, Mrs. Binger ayaa aasaasay barnaamijkii deeq-lacageed ee rasmiga ah iyo habka jaaliyada ku salaysan ee ka mid ahaanshaha dhaxalka dhaxalka.
Barnaamijka deeqda McKnight wuxuu ka hadlayaa tobannaan sano, iyo jiilalka, danaha iyo maalgashiyada kala duwan. Xubnihii afaraad ee aasaaska qoysaska gaarka ah waxay sii wadaan inay firfircoonaadaan guddiga wakiillada.
Sannad kasta, Hay'adda McKnight Foundation iyo Golaha Minnesota ee Nonprofits ayaa maamula afar qof oo reer Minnesota ah oo si isdaba-joog ah u siiya bulshooyinkeena.
Abaalmarintan waxaa loogu magac daray Virginia McKnight Binger, guddiga kowaad ee guddiga iyo gabadha kaliya ee macalimiinta McKnight. Mrs. Binger wuxuu geeriyooday sannadkii 2002, abaalmarintaanna waxay naga caawinaysaa in aan xusuusanno niyadjabkeeda sabirnimada, naxariisashada iyo deeqsinimada.
Asal ahaan waxa loogu yeeray "Virginia McKnight Binger Awards Awards" ee Adeegga Aadanaha, abaalmarinta ayaa sharfay 280 qof tan iyo markii la soo bandhigay 1985.